I-SAFRON LOFT - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMohan
Indawo etofotofo yeholide emfutshane okanye kwishishini elikufutshane neRatmalana Trade zone naseMount Lavinia kunye nokutya okushushu elunxwemeni. I-Burgerhut Macdonald 's Pizza hut Subway imizuzu embalwa xa uhamba ngeenyawo. Iivenkile zokutyela zaselwandle zikumgama wemizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo.
iibhedi ezimbini ezilala umntu omnye kunye kwigumbi lokulala. Igumbi elikhulu lebhedi elinezibane zokufunda ezinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kwiibhedi kuquka neWiFi. Isixhobo sokudlala ividiyo esine-monitor efumanekayo yokubukela iDVD. Inkqubo yemidlalo yeqonga yasekhaya iyafumaneka nayo.
Indawo yokugcina ukutya
eneepleyiti nezinto zokupheka netafile encinci nesitulo
Igumbi lokuhlala elinesofa nezitulo ezimbini
elinamanzi ashushu nomatshini wokuhlamba impahla ozenzekelayo.
kumgangatho wesibini kwindawo efanelekileyo yokucofa ilanga elishushu nokubuka ulwandle emkhenkceni.
Akuvumelekanga ukutshaya kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex.
Iintsuku eziyi-7 e Dehiwala-Mount Lavinia
Kwindlela ephambili ekuthiwa yiGalle Road, iMount lavinia. Ngoko umgama wokuhamba imizuzu eyi-7 ukuya elunxwemeni eMount lavinia phantsi kweKholeji ukuba uyayazi indawo! Ukutya neevenkile zokutyela ezininzi elunxwemeni
Ukutya kwamazwe ngamazwe/iindawo onokuya kuzo zifumaneka kumgama wemizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Mohan
Nceda uqaphele ukuba uyakwazi ukuqhagamshelana no kulandelayo.
0094766658035 0094771572 Ikwafumaneka naku-WhatsApp.
imeyile. mohanari2019@gmail.com iyafumaneka ukususela nge-01 kaJanwari 2022
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dehiwala-Mount Lavinia